Mogadishu Journal » Xant ayaa leh: Depay oo ku jira booska ugu sareeya ee u dhaqaaqista Barcelona, ​​Man Utd ayaa dooneysa labo saxiix
Barcelona ayaa weli lala xiriirinayaa inay u dhaqaaqeyso xiddiga kooxda Lyon Memphis Depay.
Memphis Depay ayaa weli ah dookha ay Barcelona ka doonayso suuqa kala iibsiga, halka Manchester United ay dooneyso Jadon Sancho iyo Alex Telles daaqaddaan.
Camaaliqada LaLiga ee Barca waxaa lala xiriirinayay weeraryahanno badan maadaama ay dib u dhis ku sameynayeen xilligii Ronald Koeman.
Depay waxay umuuqatay inuu ugu jeclaa kubiirista, waxayna umuuqataa inaysan waxba iska badalin.
SHEEKADA DUGSIGA - KU DHEH SI FARXAD LEH KU BIIRTA BARCELONA
Depay ayaa qarka u saaran inuu ku biiro Barcelona isagoo ka tagaya kooxda Lyon, sida laga soo xigtay Mundo Deportivo.
Warbixinta ayaa sheegeysa in Depay, oo 26 jir ah, uu ku habboon yahay muuqaalka iyo mushaharka laga filayo Barca.
Depay iyo Koeman ayaa isla soo shaqeeyay halka kan dambe uu mas'uul ka ahaa Netherlands intii u dhaxeysay 2018 iyo 2020.
- United ayaa weli rajeyneysa inay la soo wareegto labo saxiix suuqa kala iibsiga. The Sun ayaa sheegeysa in Red Devils ay raadineyso inay gacanta ku dhigto xiddiga Borussia Dortmund Sancho iyo daafaca bidix ee Porto Telles.
- Arsenal waxaa laga yaabaa inay ku dhawaato inay xoojiso saxiixa Houssem Aouar. Telefoot ayaa sheegaysa in weeraryahanka uu ogolaaday inuu ku biiro kooxda, iyadoo Lyon iyo Arsenal ay wadahadalo kula jiraan qiimaha ay ku doonayaan.
- Marka ay sii wadaan raadinta daafaca, Manchester City ayaa laga yaabaa inay ku dhowdahay inay go'aan gaarto. Shabakada Goal ayaa qortay in kooxda Premier League ay wadahadalo kula jirto Benfica oo ku aadan Ruben Dias, heshiiskaas oo u horseedi kara Nicolas Otamendi inuu dhanka kale maro. Dhanka kale, ESPN waxay leedahay Sevilla waxay rajeyneysaa dalab hormaris ah oo ka yimaada City oo ku aadan Jules Kounde kadib markii dalab hordhac ah oo gaaraya .2 50.2million (€ 55m) la diiday.
- Chelsea lagama yaabo inay qarash gareyso wali. The Mirror ayaa werisay inay doonayaan inay u dhaqaaqaan markale ciyaaryahanka khadka dhexe ee West Ham Declan Rice, waxayna taasi u horseedi kartaa Jorginho inuu ku biiro Arsenal.
- Sergino Dest ayaa lafilayaa inuu ku biiro Barcelona Guillem Balague ayaa sheegay in daafaca midig ee Ajax inuu si rasmi ah ugu biiro usbuuca dambe. Barcelona ayaa ka iibisay Nelson Semedo kooxda Wolves todobaadkan.
- Dhaqdhaqaaqa dambe ma jiri karaa suuqa kala iibsiga ee Tottenham? The Sun ayaa qortay in Spurs ay wadahadalo kula jirto saxiixa daafaca Inter Milan Skriniar waxayna diyaar u yihiin inay bixiyaan inta udhaxeysa 25 milyan oo ginni (€ 27.4m) iyo £ 30m (€ 32.9m), taasoo aad uga hooseysa qiimeynta Inter.